Sheekada filimka Padman: Akshay Kumar iyo Radhika Apte oo hadal heynta la wareegeen iyo fariin wacan oo waaqici ah – Filimside.net
Inaba caadi ma ahan Super Star Akshay Kumar bandhigiisa filimka Padman si la mid ah Radhika Apte oo xaaskiisa ku mataleyso iyadana qaab jiliin awood badan ayay la timid.
Waa qasab haween walbo oo dunida ku nool inay daawado filimka Padman iyo fariintiisa wacan ee lagu soo gudbiyay filimkaan oo si heer sare ah lo diyaariyay.
Qiimeynta Fariinta Filimkan Cel Celis Ahaan: 4/5 (Afar xidig ayuu helay)
Jilaayaasha Filimkaan: Akshay Kumar, Sonam Kapoor, Radhika Apte
Muxuu Ku Wanaagsan Padman: Akshay Kumar oo si 100% ka sareyso doorkiisa filimkaan kaga run sheegay, qof walbana raali galin doono, awooda bandhig ahaan ee Radhika Apte iyo Sonam Kapoor muuqaalkeeda kooban balse ku xiiso galin doono.
Muxuu Ku Liitaa: Mararka qaar Padman muuqaalo aan loo baahneyn oo mada daalo laga rabay ayaa ku jiraan balse la iska dhaafi karay.
Daawo Ama Ha Daawanin: Inaba caadi ma ahan bandhiga Akshay Kumar, fariinta filimkan oo waaqici ah kana hadleyso mowduuc xasaasi ah, mada daalada meesha kama marno intaas hadii aad u baahan tahay daawo Padman waa hubaal inaad ka heli doontid.
Fariinta Filimka Padman Oo Kooban: Lakshmikant Chauhan (Akshay Kumar) waa nin qalbi wanaagsan sidoo kalena qoyskiisa inuu caawiyo iyo dadka tuulada kula nool.
Lakshmikant Chauhan (Akshay Kumar) wuxuu ogaanaa sida xaaskiisa Gayatri (Radhika Apte) u dhiban tahay marka dhiiga caadada ku dhaco ayadoo adeegsato agab aan nadiif ahayn.
Lakshmikant Chauhan (Akshay Kumar) oo ka dan qaaday dhibaatada xaaskiisa oo halis ugu jirto in Infection ku dhaco wuxuu sii ogaanaa in dumarka tuulada gobolka Madhya Pradesh ku nool ka wada siman yihiin xirashada agab aan nadiif ahay xiliga dhiiga caadada ay qabaan.
Sidaa darteed Lakshmikant Chauhan (Akshay Kumar) xaaskiisa wuxuu usoo iibinaa agab la xirto oo nadiif ah sidoo kalena qaali ah asigoo faraxsan marka uu u keeno ayayba dhibaato u bilaabanaa waxayna kula dagaalee sababta shuqulka arimaha gaarka ah ee haweynka usoo fara gashtay.
Laakiin Lakshmikant Chauhan (Akshay Kumar) ma niyad jabaayo wuxu ku fikiraa inuu sameeyo agab nadiif ah oo suuf, caleen geed iyo waxyaabo kale ka sameesay oo qiimo jaban dumarka xiran karaan xiliga dhiiga caadada halka ay xiran lahaayeen marwo wasaq ah oo xanuuno kala duwan ka qaadi karaan.
Lakshmikant Chauhan (Akshay Kumar) dagaalka kowaad reerkiisa ayaa ku bilaabayaan kuna tilmaamayaan nin waalan oo aan is ogeyn waxa u sameenayo ay yihiin dhaqan guuris iyo ceeb inuu faraha la galay.
Lakshmikant Chauhan (Akshay Kumar) oo dhiban laakiin hadafkiisa rabo inuu hirgalo waxaa garab siineyso gabadha mutacalimada ah ee wax badan fahansan Rhea (Sonam Kapoor).
Qaybaha dambe waxaa loo daawan doonaa Lakshmikant Chauhan (Akshay Kumar) oo garab ka helaayo Rhea (Sonam Kapoor) sida ay wacyi galin bulshada ugu sameenayaan iyo qaabkii dumarka ay u qaadan lahaayeen agabka raqiiska ah ee uu sameeyay kaasi oo ay xiran karaan xiliga dhiiga caadada iyo qoyskiisa ugu dambeyntii sida Lakshmikant Chauhan (Akshay Kumar) garab u siin doonaan si gaar ah xaaskiisa sida ay u aqbali doonto dhaqankiisa ay la yaaban tahay.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Padman: Filimkaan uu ku saabsan nolosha hal abuuraha reer Tamil Arunachalam Muruganantham si heer sare ah ayuu Director R Balki isugu daba riday fariin ahaan.
Wuxuuna Director R Balki ku amaanan yahay fariin xasaasi ah inuu doortay hadana si waaqici ah u sameeyay kuna dhex daray mada daalo lagu raaxeesan karo.
Kaliya halka iin uu leeyahay ayaa ah qaabka Sonam Kapoor sheekada kusoo galeyso inaysan ahayn mid adag iyo sidoo kale jaceylka aan loo baahneyn ee Akshay iyo Sonam ka dhex dhalaayo inkastoo hab mada daalo laga rabay.
Sidoo kale Padman malahan heeso hirgaleen balse muusigiiste Amit Trivedi wuu dadaalay madaama labo hees filimkaan ku jiraan siweyn kuu soo jiidanayaan waana ‘Aaj Se Teri’ iyo Pad Man heesta magaca filimka.
Bandhiga Jilaayaasha: Superstar Akshay Kumar in lo sacabo tumo ayuu mudan yahay ma jiro atoore ku dhiiran karo sameynta fariin Hindiya xitaa in laga hadlo ceeb ka tahay waa arimaha haweyna gaar ahaan waxyaabaha la xariiro dhiiga caadada inay ragg ka hadlaan ama bulshada ka hadasho.
Akshay si qurux badan oo waligiis lagu xasuusan doono ayuu Padman u matalay wuxuu tusaale u yahay atoorayaasha kale inay hada kadib geesinimo la imaadaan iskuna dayaan sameynta fariimaha wacyi galinta ah ee bulshada u baahan.
Akshay wuxuu dheer yahay atoorayaasha kale door walbo oo loo dhiibo inu 100% kaga run sheegi karo weliba Padman kuma sii jiro waa filim uu ku mudan yahay in abaal marino kala duwan lagu siiyo waayo udub dhexaadka filimkaan waa isaga.
Radhika Apte waa geesiyad aan gambanin waxayna cagta cagta ku saartay Super star-ka weyn Akshay Kumar weliba sida ay kaga hor imaaneyso iyo ad adeega ay filimkaan ku matashay waa mid aqoonsi caalami ah kusii heli doonto gabadhaan taqaano ama ku xeel dheer sida filimada doorarka heerka sare ah looga qaato.
Sonam Kapoor doorkeeda caawiyaha waa mid wacan laakiin fariinta waaqiciga ah ee ugu muhiimsan Akshay iyo Radhika ayaa kala qeebsadeen iyadana booska laga siiyay filimkan ma xumo.
Gunaanad: Director R Balki sida uu fariinta Padman u dhigay iyo asigoo helay Akshay oo fariin walbo matali karo laguna sii daray mashruucaan oo hadal heyntiisa aad u sareyso ayaa sababi doonto mashruucaan inuu guul wacan gaaro Boxoffice-kana uu mudo baaqi ku ahaado.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Padman ee Akshay Kumar amaanta lixaada leh ku helay:
waar ninkan super star nimadiisa wuu ku ciyaaraya iminkana xafaayad ayuuu so qaatey
war ninkan flopkiisiba loo qatey ladaawankaray
ma xafaayad dumarba la daawan karaaa